Zeorzia: Loza niseho nandritra ny fanokafana ny lalao Olaimpika ririnina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2018 9:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, 日本語, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Tao anatin'ny fotoana mety ho mampihetsi-po indrindra amin'ny lanonana fanokafana, nitsangana ny vahoaka nanome tehaka am-pitsanganana ireo atleta Zeorziana, tarihan'ilay mpanao sky Alpine, Iason Abramashvili, taorian'ny nahafatesan'ilay atleta mpikorisa an-kalesin-dranomandry, Nodar Kumaritashvili, 21 taona ny marainan'io andro io. Sary ©s.yume (lisansa Creative Commons)
Nivoaka taorian'ny misasak'alina tamin'io andro io ihany tao amin'ny forum Zeorziana ny vaovao momba ny fahafatesana mahatsiravina an'ilay mpikorisa an-kalesin-dranomandry Zeorziana Nodar Kumaritashvili ora vitsy mialoha ny fanokafana ny Lalao Olaimpika Ririnina 2010 tany Vancouver, Kanadà. Namoy ny ainy ity lehilahy 21 taona ity rehefa tsy nahatàna ny fikorisana an-kalesin-dranomandry nandritra ny fampiofanana teo akaikin'ny fiolanana farany mihoatra ny 140km isan'ora, nianjera teo amin'ny rindrina fiarovana izy ary nandona andrim-by. Noentina tany amin'ny hopitaly tamin'ny alalan'ny fiaramanidina i Kumaritashvili ary voalaza fa efa maty.
Ora maro taorian'ny loza, noarahabaina tamim-pihobiana lehibe tamin'ny lanonana fanokafana ny ekipa Olaimpika ao Zeorzia manao fehiloha sy fehi-tanana mainty ary mitondra sainam-pirenena miaraka amin'ny ribao mainty. Rehefa akaiky hifarana ny lanonana, nomem-boninahitra tamin'ny fahanginana minitra vitsy i Kumaritashvili.
Natsangana ireo vondrona Facebook maro sy pejin'ny mpankafy ka mpiserasera an'arivony no nanatevin-daharana izany izay naneho fiaraha-miory ho an'ny fianakaviana ny ankamaroany. Nihaona tamin'ny olona fito avy amin'ny ekipa Olaimpika Zeorziana ny filohan'i Zeorzia, Mikheil Saakashvili, izay tany Canada nandritra ny fitsidihana roa andro, ary nangataka azy ireo mba hanatrika ny lanonana fanokafana. Nilaza ihany koa ny minisitry ny Fanatanjahantena sy ny Kolontsaina, Nikoloz Rurua fa hampitondraina ny anaran'i Nodar Kumaritashvili ny lalana tari-kisaka vaovao hosokafana ao Bakuriani, Zeorzia.
Mpisera Twitter naneho hevitra momba ny loza.
@ DeCap69: Tokony hanome an'i Nodar Kumaritashvili medaly volamena aorian'ny fahafatesana izy ireo … izany no zavatra mendrika tokony atao mba hahatsiarovana atleta iray lavo …
Namoaka ny sarin'ilay loza mahatsiravina hatrany ireo sehatra fifanakalozan-kevitra (forum), sy ireo fampahalalam-baovao iraisampirenena sy Zeorziana marobe, ka nahatezitra ny maro ary niteraka sioka maro be.
@ 15minutesstupid Tokony hamoaka ny fahafatesan'ilay mpikorisa amin'ny kalesin-dranomandry Olympiana Nodar Kumaritashvili ve ny tambajotram-pahitalavitra
Raha nanambara ny Federasion'ny fikorisahana an-kalesin-dranomandry iraisampirenena fa tsy vokatry ny “làlana tsy azo antoka” ny loza mahatsiravina fa kosa noho ny “fahadisoana maha-olona”, tsy resy lahatra tamin'izany ireo mpisera ao amin'ny forum Zeorziana, izay nampiasa ny sarin'i Nodar Kumaritashvili miaraka amin'ny “RIP” ao anatiny ny ankamaroany.
Nandinika tsara aho ka raha tsy nisy ireo andrim-by, dia mety ho velona izy. Voadona izy, saingy tsy maty raha nisy toerana banga fa tsy ireo andry ireo, na raha tsy mifanakaiky loatra ireo andry ireo. Nahatonga ny fahafatesan'ilay tovolahy ny hadisoana nataon'ny mpikarakara. Nahoana no tsy mba tompon'andraikitra amin'ny fitandremana ny ain'olona? Ankoatra izany, tena naratra mafy tokoa ireo atleta efa matihanina nianjera tamin'izany lalana izany. Henatra ho an'izay nanamboatra izany
Mpisera Twitter maro ihany koa no naneho fisalasalana momba ny fanazavana ofisialy.
@designspotnyc ahoana no ahafahan'izy ireo manome tsiny ny fahafatesan'ilay mpikorisa an-kalesin-dranomandry noho ny tsy fahampiana traikefa? Ny lahatsoratra novakiako omaly dia manaporofo fa matihanina izy. mahamenatra!
Tsy ilay zotra no niteraka ny fahafatesan'ilay mpikorisa??? Eny izay mihitsy!
Na dia ny Google aza mba niatrika fanakianana raha nampiseho mpikorisa an-kalesin-dranomandry nandritra ny tontolo andro ny fangony vaovao ao amin'ny pejin'ny milina fikarohana, ka niteraka fisafotofotoana manerantany teo amin'ireo mpiserasera izay tsy mahafantatra intsony raha fanajana ilay atleta maty izany, na vazivazy ratsy fotsiny.
@tara IMHO raha hametraka sarina mpikorisa an-kalesin-dranomandry ao amin'ny pejiny ny Google, dia tokony hanamarika hoe fanajana an'i Nodar Kumaritashvili
@lisarowan: Mpikorisa an-kalesin-dranomandry no sary Olaimpikan'ny Google ankehitriny – fanahy iniana sa efa nomanina? Tsy fantatro raha fitiavana fanomezam-boninahitra na mankahala esoeso
Na noho ny fisavorovoroana naterak'izany, izay tsikera avy amin'ireo mpiserasera maro, na noho ny fotoana nilaina mba hanamboarana fango hafa, novaina ho “snowboarder” ilay fango ny hariva. Na izany aza, tsy nilaozana fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter izany.
@steverubel: Nofafan'ny Google ny sary Olaimpika androany ary novaina “snowboarding”. Fanapahan-kevitra tsara. Nahoana no tsy nieritreritra izany izy ireo omaly?
RT @mashable: Ny lahatsoratra tena niparitaka be tamin'ny alalan'ny “retweet” amin'izao fotoana izao: “Nesorin'ny Google ny Fango fikorisana an-kalesin-dranomandry taorian'ny tabataba”